khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal चितवनमा निषेधाज्ञा , अबस्था हेरेर केहि खुकुलो ! – khabarmuluk.com
चितवनमा निषेधाज्ञा , अबस्था हेरेर केहि खुकुलो !
चितवन । चितवनमा गए राती १२ बजेबाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ । बिहान सबेरैदेखि बजार लगायतका स्थानहरुमा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको छ । काम विशेष बाहेककालाई सोधपुछ गरि आएकै बाटो तर्फ फर्काइएको छ । बिहान ९ बजेपछी प्रहरीले चोक चोकमा र भित्री सडकका पसलहरु समेत बन्द गराएको छ ।
आज पहिलो दिन भएकोले प्राय सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गरिएको पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक देबराज काफ्लेले बताए । पहिलो दिन भएको र त्यसमाथी बिवाहाका लगन परेकोले धेरै कडाइ नगरिएको उनले बताए ।भोलीका दिनबाट अलि कडाइ गरिने उनले बताए ।
निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्यान्न तथा तरकारी पसल निश्चित समयका लागि मात्र संचालन गर्न पाइने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको प आदेशमा खाद्यान्न तरकारी लगायतका सेवा दिने पसलहरु विहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र संचालन गर्न पाइने जानाइएको छ ।
यस्तै उद्योग कलकारखाना संचालन गर्दा कर्मचारी तथा कामदार सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र उद्योग भित्र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । उद्योगभित्र आवासको व्यवस्थ गर्न नसके कर्मचारी तथा कामदारलाई उद्योगलेनै ल्याउने लाने व्यवस्था गर्नुपर्ने जारी आदेशमा भनिएको छ ।
चितवनमा आउँदो ३१ गते सम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। थप आजका तस्बिर: